Naltrexone Monotherapy (၂၀၁၈) ဖြင့်ကုသမှုခံယူသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
Naltrexone Monotherapy (2018) နဲ့ကုသ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
Prim စောင့်ရှောက်အဖော် CNS disorders ။ 2018 ဖေဖော်ဝါရီ 15; 20 (1) ။ pii: 17l02109 ။ Doi: 10.4088 / PCC.17l02109 ။
Camacho M က1, Moura AR1,2, Oliveira-Maia AJ3,1,2,4,5.
အယ်ဒီတာရန်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူမှုရေး, လုပ်ငန်းခွင်, ဥပဒေရေးရာ, ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်တွေကိုနှင့်အတူဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ထိန်းအကွပ်မဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူဖြစ်ကြသည်။1 ပုံမှန်အားဖြင့်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမကြာခဏချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ရောင်စဉ်၌မိမိတို့ပါဝင်မှဦးဆောင်အပြစ်ရှိတယ်နောင်တနှင့် Self-ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်၏ခံစားချက်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောပေးထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ထိနျးခြုပျဖို့ပျက်ကွက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။2 အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ကုသမှုအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်3 serotonin reuptake inhibitors, ခံစားချက်တည်ငြိမ်မှု, နှင့် antipsychotics အပါအဝင်အများအပြား psychotherapeutic နှင့် pharmacologic ကြားဝင်များအတွက်ကွဲပြားအောင်မြင်မှု၏။ သက်သေ4,5 naltrexone, Classical opioid မှီခို၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုထားတဲ့ opioid ရန်ဤအခြေအနေများ၏ကုသမှုများအတွက် option ကိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ naltrexone ၏သက်ရောက်မှုအရှင် compulsive အပြုအမူတွေ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအခြေခံမှထင်ကြသည် VTA dopaminergic အာရုံခံဟန့်တားခြင်း, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင်γ-aminobutyric အက်ဆစ် interneurons အပေါ် opioid receptors ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။6 ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာ naltrexone monotherapy နဲ့ကုသသူ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့စိတ်ရှည်၏ဖြစ်ရပ်သတင်းပို့ပါ။
ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြဘို့ငါတို့ပြင်ပလူနာ Psychiatry ဆေးခန်းမှပေးအပ်တစ်ဦးက 27 နှစ်အရွယ်လူ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ။ " ဒီလူနာ transvestite ယောက်ျား "နဲ့တစ်ဦးအထူးသဖြင့် fixation ဖော်ပြလောက်ကူးယဉျနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်းအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံသိသိသာသာငွေပမာဏဖြုန်းညွှန်ပြ။ "သူကလိင်ကွဲကိုယ်တော်တိုင်စဉ်းစားနဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြထား" ဟုသူကထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ရွံရှာစေထူးဆန်းတဲ့ကောက်သော, "။ အဆိုပါလူနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်များအတွက်ရည်ညွှန်းနှင့်ယေးလ်-Brown က obsessive compulsive စကေး-II ကို၏မလှူ subscale ပြီးစီးခဲ့သည်7 မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်ရန် (စားပွဲတင် 1) ။ အများဆုံးစိတ်ပျက်စရာမလှူ transvestite ယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစဉ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်2လအတွင်းဖြစ်ပေါ်, သူလည်းမရှိ,3နာရီထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 10 နာရီနေ့တိုင်းတက်ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘုံ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသော်လည်း, သူ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါလူနာသည်ဤအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းခံစားခဲ့ရနှင့်ဆေးခန်းသိသိသာသာစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူ 20 မီလီဂရမ် / ဃနှင့်တစ်ဦးအထောက်အကူ psychotherapy program ကိုတက်ရောက်ခြင်း fluoxetine တာခံခဲ့ရပေမယ့်သူအများအပြားစိတ်မကျဆေး Antidepressants, ခံစားချက်တည်ငြိမ်မှု, neuroleptics နှင့် psychotherapy ၏အခြားသင်တန်းများအပါအဝင်ဤအခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကုသမှုမှမပါရေရှည်အကျိုးအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကုသမှု optimization (fluoxetine 40 မီလီဂရမ် / ဃနှင့် aripiprazole 10 မီလီဂရမ် / ဃ) ၏ရောဂါလက္ခဏာများမပြောင်းလဲ ရှိ. , naltrexone တစ်ရုံးတင်စစ်ဆေး (50 မီလီဂရမ် / ဃ) အဆိုပြုထားခဲ့ပါတယ်။
2 လအတွင်းပြီးနောက်လူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့၏ထိန်းချုပ်မှုများလျှော့ချရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ သူကပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံရာတွင်ပါဝင်နေဘူး, မိမိကုသမှုနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတခြားဆေး၏အသုံးပြုမှုကိုရန်မအကျိုးအတွက်စွပ်စွဲကတည်းကမိမိပဏာမခြေလှမ်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယူပြီးရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းနှင့်သာရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက် naltrexone တာခံခဲ့ရတယ်။ သူ psychotherapy တက်ရောက်ရန်ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ naltrexone ထိုးမီလီဂရမ် / ဃ 100 မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ naltrexone monotherapy ၏ 10 လအတွင်းပြီးနောက်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုမှတ်ချက်ချနှင့်လူနာပြည့်တန်ဆာန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုအတွက်တဦးတည်းပြန်ဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူ naltrexone ရပ်တန့်ဖို့တစ်ဦးအလိုအလျောက်ကြိုးပမ်းမှုဖော်ပြထားပေမယ့်သူတိုးမြှင့်အကြံအစည်များကြောင့်သာ2ရက်အကြာမှာဆေးပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောတိုက်တွန်းပါသည်။ တစ်ဦးကနောက်ဆက်တွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ် (စားပွဲတင် 1) မိမိစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်တိုးတက်မှုပေမယ့်စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်။ လူနာတစ်နေ့လျှင်3နာရီထက်ညစ်ညမ်းမပိုသုံးပြီးဆက်လက်နေစဉ်, သူကပြဿနာအဖြစ်ဤအပြုအမူကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။
အခြားအစာပမြေားရှိပါတယ်4,6,10-12 အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ကိစ္စများတွင် naltrexone များအတွက်ထိရောက်မှုသတင်းပို့။ ရေမွန် et al4 fluoxetine နှင့်အတူကုထုံးတိုးပွားရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်တိုးတက်မှုများနှင့် naltrexone အသုံးပြုမှုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ2အမှုပေါင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ Bostwick နှင့် Bucci6 naltrexone sertraline နှင့်အတူကုသမှုထည့်သွင်းခဲ့သည်ပြီးနောက်လူနာရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive လွတ်ရသောရံဖန်ရံခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းတဲ့ကိစ္စများတွင်အလားတူရလဒ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Ryback11 concomitantly စိတ်ကြွဆေး, စိတ်မကျဆေး Antidepressants, ခံစားချက်တည်ငြိမ်မှု, antipsychotics သို့မဟုတ်အခြားဆေးဝါးနဲ့ကုသ 21 အထီးဆယ်ကျော်သက်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက် naltrexone ၏ open-တံဆိပ်လေ့လာမှုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့အားလူနာ, 71% naltrexone နှင့်အတူသိသိသာသာလိင်စိတ်နိုးထအတွက်လျှော့ချရေး, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ naltrexone အုပ်ချုပ်ရေးရပ်စဲခံခဲ့ရသည့်အခါ9လူနာ 10 ခုနှစ်တွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအခြေခံအဆင့်ဆင့်သို့ပြောင်း။11 Grant ကနှင့်ကင်မ်10 High-ထိုး naltrexone (150 မီလီဂရမ် / ဃ) နဲ့ကုသမှုပြီးနောက် comorbid compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ kleptomania တစ်ဦးအမှု၌ရမ္မက်ကိုခိုးယူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏လွှတ်အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့် opioid ရန် High-ထိုး fluoxetine မှတွဲဖက်ခဲ့တာသို့မဟုတ် monotherapy များတွင်အသုံးပြုလျှင်မသိရသေးဖြစ်ပါသည် ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အောင်မြင်စွာ Kraus et al အားဖြင့်ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာ naltrexone monotherapy, အသုံးပြု. ကုသခံခဲ့ရသည်ကတည်းကဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စကဒီစာပေမှဖြည့်စွက်12 naltrexone monotherapy နှင့်အတူကုသမှုအပြီးတွင်ကြည့်ရှုအလွန်အကျွံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွက်လျှော့ချရေး၏။
ယင်းထကြွလွယ်သော-compulsive ရောင်စဉ်၏အခြားမမှန်များ၏အခြေအနေတွင် naltrexone ၏အသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေသာဓက, အမည်ရ compulsive ဝယ်လည်းဖြစ်ပါသည်,13 kleptomania,10 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း,5 အရက်,14 trichotillomania,15 အစာစားခြင်းမမှန်,16 နှင့်နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် Self-ဒဏ်ရာအပြုအမူတွေ။17 အများဆုံးကိစ္စများတွင် naltrexone ထိုကဲ့သို့သောစိတ်မကျဆေး Antidepressants ကဲ့သို့သောအခြားကုသမှု, တိုးပွားဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး interaction ကများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနေချိန်တွင်အရက်ထဲမှာဥပမာအားဖြင့်ကြောင်း naltrexone monotherapy, ပေါင်းစပ်ကုသမှုအဖြစ်အညီအမျှထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်သက်သေအထောက်အထားမရှိဖြစ်ပါတယ်။14 ထို့အပွငျ naltrexone လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတူရောက်စွက်ဖက်ဖို့ပေါ်လာမပင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။18 သို့သော်လည်းပေါင်းစပ်ကုသမှုများအတွက်အားသာချက်များရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများအတွက်အကြံပြုထားသည်အဖြစ်ဤတွင်ကျနော်တို့ fluoxetine နှင့်အတူသို့မဟုတ် naltrexone ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှကုသမှု၏ပြတ်တောက်မှစွပ်စွဲနိုင်ထားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုတိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။19 naltrexone monotherapy လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive များအတွက်ကောင်းစွာသည်းခံ, လုံခြုံနှင့်ထိရောက်သောဆေးဝါးဖြစ်နိုင်ပါတယ်စဉ်နိဂုံးချုပ်, ကျပန်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ကြသည်။
Black က DW, Kehrberg LLD, Flumerfelt DL, et al ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတင်းပို့ 36 ဘာသာရပ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 154 (2): 243-249 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Kafka အမတ်။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010; 39 (2): 377-400 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Dell'Osso B, Altamura AC အ, Allen ကတစ်ဦး, et al ။ epidemiological နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အပေါ်လက်တွေ့ updates များကို: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ EUR Arch စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience ။ 2006; 256 (8): 464-475 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
ရေမွန် NC, Grant က je ကင်မ် SW, et al ။ naltrexone နှင့် serotonin reuptake inhibitors နှင့်အတူ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကုသမှုနှစ်ခုဖြစ်ရပ်တခု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2002; 17 (4): 201-205 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Kim က SW, Grant က je, Adson DE, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49 (11): 914-921 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Bostwick JM, Bucci ဂျေအေ။ naltrexone နဲ့ကုသအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ Mayo အဘိဓါန် Clin proc ။ 2008; 83 (2): 226-230 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Storch EA ၏, Rasmussen လုပ် SA, စျေး LH, et al ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ယေးလ်-Brown က obsessive-compulsive စကေး-ဒုတိယအ Edition ကို၏ psychometric အကဲဖြတ်။ Psychol အကဲဖြတ်။ 2010; 22 (2): 223-232 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Campos RC, Gonçalves B, Rasmussen လုပ် SA, et al ။ နှစ်ခု nonclinical နမူနာအတူ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory-II ကို (BDI-II ကို) ပဏာမ psychometric အချက်အလက်များ၏ပေါ်တူဂီဗားရှင်း။ EUR J ကို Psychol အကဲဖြတ်။ 2011; 27 (4): 258-264 ။ CrossRef
ဆေးလ်ဗား DR, Campos R. Alguns dados normativos [သည့် Spielberg Stait-Trate တော့ပူပန် Inventory-Form ကို Y ကို (Stay-Y ကို) ၏စံချိန်စံညွှန်းဒေတာInventárioက de Estado-Traçoက de Ansiedade-forma Y ကို (Stay-Y ကို) က de Spielberg မသန်စွမ်းတစ်ဦးpopulação portuguesa ပြုပါ ] ပျေါတူဂီလူဦးရေအဘို့။ ဗြာဆိပ်ကမ်း Psicol ။ 1998; 33 (2): 71-89 ။
je ကင်မ် SW ပေးသနား။ kleptomania နှင့် naltrexone နဲ့ကုသ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 13 (4): 229-231 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Ryback RS ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကုသရာတွင် Naltrexone ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 65 (7): 982-986 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
et al Kraus SW, Meshberg-Cohen ကို S ကို Martino က S နဲ့။ naltrexone နှင့်အတူ compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကုသမှု: တစ်ကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015; 172 (12): 1260-1261 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
je ပေးသနား။ naltrexone နဲ့ကုသ compulsive ဝယ်သုံးအမှုပေါင်း။ int J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Clin Pract ။ 2003;7(3): 223-225 ။ CrossRef
O'Malley အက်စ်အက်စ်, ရော်ဘင် RW, Levenson AL, et al ။ Naltrexone တစ်ဦးတည်းနှင့်အရက် Alaska ကအတွက်မှီခိုနှင့်ကျေးလက် setting တွင်နေထိုင်သည် non-က၏ကုသမှုများအတွက် sertraline နှင့်အတူ: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008; 32 (7): 1271-1283 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
et al Grant JE, Odlaug BL, Schreiber LR ။ trichotillomania ဆေးကိုကုသရာတွင် opiate ရန်ကူ naltrexone - မျက်စိကန်းသော၊ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2014; 34 (1): 134-138 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Marrazzi MA, Bacon JP, Kinzie J ကို, et al ။ anorexia nervosa နှင့် bulimia nervosa များ၏ကုသမှု Naltrexone အသုံးပြုခြင်း။ int Clin Psychopharmacol ။ 1995; 10 (3): 163-172 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
McGee MD ။ naltrexone နှင့်အတူနယ်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Self- ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 58 (1): 32-33 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
et al ဗန် Ahlen H ကို, Piechota HJ, Kias HJ ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် Opiate ရန်: တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အသစ်သောကုသမှု option ကို? naltrexone အတူရှေ့ပြေးလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ EUR Urol ။ 1994; 28 (3): 246-250 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
Amiaz R ကို, Fostick L ကို, ဂေရရှုန်တစ်ဦးက, et al ။ OCD အတွက် Naltrexone တိုးပွား: တစ်ကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled Cross-ကျော်လေ့လာမှု။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2008; 18 (6): 455-461 ။ PubMed CrossRef Abstract ကိုပြပါ
ana Rita Moura, MDA, ခ
Albino ဂျေ Oliveira-Maia, MD MPH, PhDa, b, c, d
aChampalimaud လက်တွေ့စင်တာ, အမည်မသိ, လစ္စဘွန်း, ပေါ်တူဂီများအတွက် Champalimaud ရေးစင်တာ
စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး bDepartment, Centro Hospitalar က de Lisboa Ocidental, လစ္စဘွန်း, ပေါ်တူဂီ
cChampalimaud သုတေသနစင်တာ, အမည်မသိများအတွက် Champalimaud စင်တာ, လစ္စဘွန်း, ပေါ်တူဂီ
dNOVA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, Faculdade က de CiênciasMédicas, Universidad Nova က de Lisboa, လစ္စဘွန်း, ပေါ်တူဂီ
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း / ထောက်ခံမှု: အဘယ်သူမျှမ။
ယခင်တင်ဆက်မှု: စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ XII အမျိုးသားကွန်ဂရက်မှာတင်ဆက်; နိုဝင်ဘာလ 10-12, 2016; Vilamoura, ပေါ်တူဂီ။
လူနာသဘောတူခွင့်ပြုချက်: အဆိုပါလူနာကိစ္စတွင်ထုတ်ဝေစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်ပေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖယ်ရှား-ဖော်ထုတ်ထားပြီး anonymity ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
အွန်လိုင်း Published: ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2018 ။
Prim စောင့်ရှောက်အဖော် CNS disorders 2018; 20 (1): 17l02109
ကိုးကားရန်: Camacho M က, Moura AR, Oliveira-Maia AJ ။ naltrexone monotherapy နဲ့ကုသ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ။ Prim စောင့်ရှောက်အဖော် CNS disorders ။ 2018; 20 (1): 17l02109 ။
share ရန်: https://doi.org/10.4088/PCC.17l02109